बेपत्ता भनिएकी सांसदः माओवादीले दिएको ५५ लाख फिर्ता गरेर फेरि एमालेमै ! « Mechipost.com
बेपत्ता भनिएकी सांसदः माओवादीले दिएको ५५ लाख फिर्ता गरेर फेरि एमालेमै !
प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०७८, शनिबार १४:२५
फिदिम । तीन दिनदेखि ‘हराइरहेकी’ लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला खत्री वली अहिले सम्पर्कमा आएकी छिन्। उनी दाङ जिल्लाको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’बाट उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद हुन्।
दाङ जिल्ला प्रहरीका अनुसार उनी अहिले सम्पर्कमा छिन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुरेश काफ्लेका अनुसार शुक्रबार राति र आइतबार बिहानसमेत उनको फोनमा सम्पर्क भएको थियो। अहिले उनी अस्थायी राजधानी बुटवलमै छिन्। प्रहरीका अनुसार उनी कान र घाँटीमा समस्या भएका कारण उनी नेपालगन्ज उपचार गराउन गएको बताएकी थिइन्।
तर उनको पार्टी नेकपा माओवादीले भने उनी तीन दिनदेखि सम्पर्कबिहीन भएको बताएको छ। माओवादी सांसद इन्द्रजित थारुका अनुसार आज पार्टीको संसदीय दलको बैठक छ। त्यही बैठकमा सहभागी गराउनका लागि सम्पर्क गर्दा उनी नभेटिएको थारुले बताए।
एमालेबाट माओवादीतिर, फेरि वेपत्ता
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेश सांसदमा निर्वाचित उत्तरकुमार वलीको एउटा दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि एमालेले उनलाई उम्मेदवार बनाएर उपनिर्वाचन लडेकी थिइन्। उपनिर्वाचनका बेला माओवादी र एमाले ‘नेकपा’ थिए।
गत फागुनमै सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा खारेज भएर माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टाछुट्टै हैसियतमा पुगेका थिए। त्यसपछि वलीले माओवादी पार्टीमा रहने घोषणा गरेकी थिइन्। त्यो बेला पनि माओवादी र नेपाली कांग्रेसलगायतको गठबन्धनले पोख्रेल सरकार ढाल्ने योजना बनाएका थिए। त्यही बेला पोख्रेलले राजीनामा दिएर फेरि ठूलो दलको हैसियतमा आफै मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
अहिले फेरि पोखरेल अल्पमतमा छन्। माओवादी, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलगायतको गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। जसपका तीन जना मन्त्रीहरूलाई प्रदेशसभाले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेसँगै मुख्यमन्त्री पोख्रेल अल्पमतमा परेका हुन्। केही दिनमै फेरि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेका बेला सांसद विमला केसी फेरि ‘वेपत्ता’ भएकी हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा कूल ८३ जना सांसद छन्। ती मध्य जसपाबाट मन्त्री बनेका तीनजना अहिले पदमुक्त भइसकेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले आफूहरूसँग ४१ सांसद रहेको दाबी गरेको छ। एकजना बिमला पनि हुन्। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा भने ३८ जना सांसद छन्।
स्रोतका अनुसार अहिले उनी एमाले (मुख्यमन्त्री)कै सम्पर्कमा छिन्। केही दिनअघि उनलाई एमालेका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य मानबहादुर रावतले उनलाई फेरि एमालेमै फर्किन ‘कन्भिन्स’ गरेका थिए। रावत र मुख्यमन्त्री पोखरेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशका ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजालकै गाडीमा मानबहादुर रावतले बिमलालाई नेपालगन्ज लगेका थिए। त्यहाँ उनी बिरामी भएर उपचार गर्न गएको भनिरहेकी छिन्। अहिले उनले कसैको पनि फोन उठाएकी छैनन्। एमाले निकट स्रोतका अनुसार उनीहरू शनिबार राति नै बुटवल आइसकेका छन्।
एमाले निकट स्रोतका अनुसार अघिल्लोपटक उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले करिब ५५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो। त्यसैले अन्तिम समयमा उनले माओवादी रोजेकी थिइन्। सुरुमै निर्वाचित उनका श्रीमान उत्तरकुमार वलीको थुप्रै ‘म्यामापावर कम्पनी’हरू र ठेक्कापट्टा पनि थियो। त्यो बेला उनले धेरै ऋण लगाएको पटकपटक बिमला आफैंले स्विकार्दै आएकी छिन्। खासगरी अमेरिकालगायतका देशमा पठाउने भन्दै उनले थुप्रै मानिससँग पैसा असुलेका थिए। पछि उनीविरुद्ध धेरै मुद्दाहरू परेका थिए।
उपचुनाव लड्दा पनि आफूलाई ऋण लागेको भन्दै सांसद बिमला वलीले माओवादीसँग ५५ लाख रुपैयाँ लिएकी हुन्। एमाले स्रोतका अनुसार त्यो बेला माओवादी नेता तथा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र प्रदेश सांसद सुदर्शन बरालले बिमलालाई पैसा दिएका थिए।
घर्ती अहिले नेकपा माओवादीको लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज छिन्। बराल यसअघि लुम्बिनी प्रदेशकै सामाजिक विकास मन्त्री थिए। एमाले निकट स्रोतका अनुसार त्यो बेला माओवादीले उनलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिएको थियो। तर गठबन्धनको सरकार बन्न सकेन।
अहिले एमालेमा फर्किनका लागि वलीले माओवादीलाई त्यो पैसा फिर्ता गर्ने शर्त राखेको स्रोतले बतायो। त्यही पैसाको जोहो गर्नका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले रावतलाई खटाएका हुन्। रावत मुख्यमन्त्री पोखरेलका विश्वासिलो पात्र हुन्। पार्टीले पटक(पटक कारबाही गर्दा पनि उनी पोखरेलले रावतलाई धेरैपटक बचाएका छन्। उनको चुनावी अभियानमा पनि रावत निकै सक्रिय हुँदै आएका छन्।
घर्तीले भने पैसा नै दिएको कुरा स्पष्ट स्विकार गरिनन्। कुराकानीमा उनले भनिन्֪– “त्यस्तो होइन होला। यो नितान्त सांसदहरूको कुरा भएका कारण म संलग्न त किन हुनु र ?” तीन दिनदेखि सांसद बिमलाको खोजीमा लागेका माओवादी सांसद इन्द्रजित थारुले भने पैसाको प्रलोभन हुन पनि सक्ने बताए।
“अलिअलि प्रलोभन त हुन पनि सक्छ। तर हामीसँग त्यत्रो पैसा त कहाँ हुनु र दिने ?” अहिले बुटवलमै रहेका सांसद चौधरीले भने “पैसा नै दिएर त कतिजना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ र ? त्यस्तो गर्दा साध्य पनि लाग्दैन, कतिलाई पैसा दिनु ?” उनका अनुसार सांसद वली भने अहिले पनि माओवादीको सम्पर्कमा छैनिन्।
“अहिले पनि उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न। कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन” उनले भने “माओवादी उहाँले नै रोज्नुभएको हो। दल रोज्न पाउनु उहाँको अधिकार नै थियो। उहाँ फेरि एमालेतिर जानुहुन्न होला, हामीतिरै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ।” (आयोमेल डटकमबाट साभार)